Home Slider - Myanmar Forest Association
Establishment of Myanmar Foresst Association
Myanmar is blessed with an abundance of natural …
To support for being clean and green environment and attaining sustainable forest management in Myanmar. Read More
Attaining clean and green environment, and sustainable forest management to be undertaken…. Read More
December 28 2020 Activities, News
ခုနှစ်သက္ကရာဇ် ဆိုတာထက် စတုတ္ထနှစ်လို့ ပြောတာက ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် ။ သစ်တော တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝမှာ စတုတ္ထနှစ် ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားကြီးအဆင့် ဖြစ်သွားပြီပေါ့ ။ ကျောင်းသားကြီးအဆင့် ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့် Major ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို…
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် FORESTRY စာစောင်ကို နယ်အသီးသီးမှ ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါလိပ်စာများတွင် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ၁။ မန္တလေးတိုင်းတွင် ဒေါ်သီတာသန့်( ဦးစီးအရာရှိ)၊ ဖုန်း-၀၉၄၀၁၅၆၀၈၆၃ ၂။ မုံရွာမြို့တွင် နိုင်လင်းစာပေ၊ ဖုန်း- ၀၉၄၀၀၅၃၅၉၃၃ ၃။ ရန်ကုန်မြို့တွင်…
January 17 2020 News
15.1.2020 ရက်နေ့တွင် MFA ရုံးခန်း၌ အထက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီတွင် ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ကိုယ်စားလှယ်…
October 30 2019 News
October 16 2019 News
September 30 2019 News
POINT COMMUNITY POSTER
September32019 News
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောအသင်း မှ ဦးတင်အေးနှင့် ဦးမောင်မောင်တင်တို့နှစ်ဦး (၂၂.၈.၂၀၁၉ )နေ့မှ (၂၆.၈.၂၀၁၉) နေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်တွင် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ ကျောသစ်တောကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၂၈) တွင်ရှိသော ဆေးကြီးတောင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် ဒေသတစ်ခု…